Nhoroondo nezve Bitcoin - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Bitcoin, Cryptocurrencies, newgenapps, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Bitcoin ine mukurumbira zvekuti yave kuda kufanana cryptocurrency kazhinji. Kunyange ichingova chimwe chezviuru zvemadhora edhijitari pamusika, hapana kuramba kuti ndiyo inonyanya kukosha. Kubva pakusikwa kwayo muna 2007 kusvika yakakwira muna 2017, Bitcoin kwakava nekumhanya kukuru kwekusimuka nekudonha. Kana iwe unoziva zvese nezvazvo cryptocurrencies kana kusakwenya pamusoro, unozoziva nezvazvo Bitcoin uye kukosha kwakaita chinhu pamusika wanhasi. Kukosha uye kusvika kwe Bitcoin zvinodzorwa nevashandisi vayo pasina kutongwa nerimwe bato.
Ndiani akasika Bitcoin?
kunyange zvazvo Bitcoin yave yakakurumbira zvakanyanya kunyangwe pakati pevanoisa mari zvakanyanya, mugadziri we Bitcoin richiri rakafukidzwa zvakadzama nezvakavanzika. Inonzi yakagadzirwa nemunhu anoenda pasi pezita rekunyepedzera, Satoshi Nakamoto. Munhu uyu akange aburitsa bepa jena muna 2008 pa bitcoin.org izvo zvakatsanangura blockchain tekinoroji inoshanda bitcoin zvakadzama. Iro bepa rinotsanangura kuti wezera kune vezera remagetsi mari system inogona kushanda sei uye kuti ichaita sei mabasa akasiyana. Iyi sisitimu yakadzikwa zvachose uye ihurongwa hwemari hwakavakirwa pasina kubatanidzwa kwenzvimbo yepakati. Izvi zvakaita Bitcoin inokwezva kune vakawanda vashandisi vaida kutsvaga sisitimu yaizovapa kuzvitonga pamusoro pemari yavo, yemusango inzira iri pachena. Hal Finney ave achizivikanwa semumwe wevakakurumbira vatori vehurongwa uyo akabatsira Satoshi Nakamoto kunzwisisa kugona kwakazara kweiyo pfungwa. Hal aive munhu wekutanga kugamuchira makumi mashanu BTC, achimaka yekutanga Bitcoin kutengeserana.
Nhoroondo yeBitcoin Transaction
Zvose Bitcoin yakagadzirwa muna 2008, yekutanga yekutengesa kutengeserana uchishandisa Bitcoin kuisa kwete pamberi pa2010 pane inozivikanwa Bitcoin forum. Kutengeserana uku kwakaitika pakati paLazlo Hanyecz, aida kutengesa 10000 Bitcoins yaaive nayo kune maviri Papa John's Pizza naJeremy Sturdivant. Kudyidzana uku kwakaitika muna Chivabvu 22, 2010, iyo inopembererwa se Bitcoin Pizza Day uye inomakwa seyekutanga yakabudirira kutengeserana kutengeserana uchishandisa Bitcoin. Panguva imwecheteyo, mugadziri we Bitcoin yakanga yanyangarika mushure mekunge network iyi yave nemukurumbira uye yakanga yawana vashandisi vakati wandei. The last message that he posted was back in December 2010. Kuzivikanwa kwe Bitcoin uye kukwezva kwayakawana kunosangana nevanhu vanofarira kuziva zvakawanda nezvemusiki. Kubva ipapo, vatori venhau vakati wandei kutenderera pasirese vanga vachiedza kutsvaga Satoshi Nakamoto.
Kunzwisisa Satoshi Nakamoto
Kunyange kuzivikanwa chaiko kwaSatoshi Nakamoto kunoramba kwakavanzika kubva kuvanhu, anoonekwa semusiki we Bitcoin. Haana kungoburitsa bepa jena raikurukura nezvehunyanzvi hwaizofamba Bitcoin, asi akakudziridzawo zvakazotevera Software mu 2009. Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vakataura kuti vaiva Satoshi Nakamoto kana kuti vakanongedza zvigunwe kune vamwe, uye kuzivikanwa kwake kwechokwadi kuchiri pamatombo. Vatapi venhau vazhinji vakaedza kuisa dhizaini yekugadzira KuIdentity yeNakamoto senyanzvi yekugadzira yakagadzira imwe huru. cryptocurrencies munyika kubva muvharumu; ichi hachisi chokwadi. Tsvagurudzo yapfuura inofanirwa kupihwa mbiri yekuti Nakamoto ndiye akagadzira izvi cryptocurrency.
Semuenzaniso, Hashcash, iyo yakagadzirwa naAdam Kudzoka kumashure muna 1997, kana kunyange goridhe rakagadzirwa naNick Szabo, inofanira kuchengetwa mupfungwa. Muchokwadi, iyo chena bepa rakabudiswa naNakamoto pacharo rakadudza mari yakambotaurwa uye dzakasiyana siyana dzakadai mari dzakagadzirwa kare. Kune zvakare runyerekupe rwekuti vagadziri ava vanogona kunge vaine hukama mukugadzirwa kwe Bitcoin.
Nepo Satoshi Nakamoto achipembererwa zvakanyanya semusiki we Bitcoin, zvinogona kunzwisiswa nei musiki achida kuchengetedza kuzivikanwa kwake. Sezvo awana mukurumbira wakawanda, Nakamoto angangoda kugara pasi peruzhinji radar uye chakavanzika kubva kuhurumende. Kana bitcoin inogamuchirwa mune ramangwana, inogona kupfuura mari yechinyakare, ichityisidzira hurumende pasi rese.
Nepo mavambo nyaya ye Bitcoin zvine zvimwe zvisinganzwisisike, ndezvimwe zvinonyanya kujeka uye zvinopembererwa cryptocurrency pasi rose. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Bitcoin, ziva maitiro ekugamuchira bitcoin semubhadharo zvino!
Maitiro ekudyara muBitcoins - Kuita Sarudzo Yakarurama